Ogadentoday Press » Maxkamadeynta Madaxweynihii horre ee Kililka: Sharci mise Sharci darro!
(OTP)- Madaxweynihii horre ee Kililka Cabdi Maxamuud ayaa Maxkamada la keenay Maanta waxaan la dhagaystay dacwad iskugu jirta Gobaad fallo ka dhacay Deegaanka intuu ahaa Hogaanka Nabadgalayada Iyo Madaxweynaha Kililka muddadii 7 sanno ahayd. Dacwada Maxkamada ayaa waxaa ku waheliyay qaar ka mid ah Masuuliyiinta Dowladiisa.
Maxakamada ayaa waxaa ka soo qayb galay Taageerayaal baddan oo Maamulkii horre taageersan Iyo Masuuliyin Dowlada horre ka tirsan, Xaaska Madaxweynaha Iyo Qaraabadiisa waxaana loo jeeday isagoo 2 Gacmood ka xidhan.
Cabdi Maxamud Cumar ayaa qareenkiisu ku dooday in Maxkamadu aysan ahayn sharci isla wax caddeyn ahna uusan jirin. Isagoo ka hadlayaa Xukunka ayuu sheegay in Xukunka qaabka looga qaadayna aysan ahayn qaab sharci ah isla markaasna uusan dhigaynin Dastuurka Dalka Itoobiya.
Qareenka Maxkamada ayaa gabi ahaanba Dacwada dalbaday 11 maalmood oo kale in baadhitaan cad lagu keenno. Warar kale waxay sheegayaan in Dad makhraatiyo ah laga raadiyay Magaalada Jigjiga kuwaas qaarkood Xabaallo sawiro ka so qaadayaan.
Cabdi ayaa dhankiisa ku doodaya innuusan wax danbi ah uusan galin Maalinkii Jigjoiga la soo galay waxaana uu sheegay in Masuuliyaddaas qaadayaan Ciidamada soo galay.